Banyere Anyị - Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd.
Na-agbaso àgwà zuru oke na ịmepụta akara mba ụwa
Mee ka akụkụ akpaaka dịghachi n'otu ma jee otu eriri, otu ụzọ
Iko mirror ụlọ ọrụ yinye mwekota
Iwulite ulo oru ulo oru ulo akwukwo nke uwa
Ndị mmadụ gbakwasara ụkwụ, na-achọ ahịa, uru na-erite uru ma merie mmeri
Kwụsị njedebe ma na-agbasi mbọ ike maka ịdị mma
Echiche Nlekọta Enterlọ Ọrụ:
Nwee ikike na iguzosi ike n'ezi ihe nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Nkọwapụta Companylọ ọrụ anyị
Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. e guzobere na 2011. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10 nke ahụmịhe n'ichepụta ụgbọala. Site na mmepe, mmepụta na ire ahịa, iji nye ndị ahịa otu ọrụ nkwụsị, nwere otu ndị magburu onwe ha iji nyere ndị ahịa aka na mmepe na mmepụta.
Anyị na ngwaahịa na-ekpuchi mba ahụ dum site na anyị nnukwu ire network na igbo anyị ahịa site zuru okè mgbe sales service.We na-ịzụlite na-agbakwunye ọhụrụ ngwaahịa ọ bụla ọkara afọ. Anyị na ngwaahịa na-tumadi exported na USA, Canada, Mexico, South America, Russia na European countries.Our ngwaahịa na-exported na mba ọzọ na-enwe a na-ekwe nkwa ahịa maka elu àgwà, asọmpi price na ezi service.For mapụtara akụkụ, niile bụ ndị mbụ nwere asambodo OEM, na-ekwe nkwa ịdị mma na mgbe ọrụ ahịa gasịrị. Ọ ga-adị anyị ụtọ ịgụta gị ọnụahịa kachasị mma ma nye gị ọrụ kacha mma.
Company'skpụrụ ụlọ ọrụ anyị bụ ịkwụwa aka ọtọ, ịdị uchu, pragmatism, ekele na altruism.We na-achọ ịnye ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile ngwaahịa kachasị mma yana ọnụahịa asọmpi. Iji mezuo ihe mgbaru ọsọ a, anyị eguzobewo njikwa njikwa, nyocha, njikwa kacha mma na usoro ntinye dị mma. na-ekwe nkwa na àgwà nke anyị na, niile ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị na nkwonkwo ịmalite na-arụkọ ọrụ na-emepụta akpaaka akụkụ nditịm ISO9001 / QS9000, TS16949 quality asambodo.
Anyị ụlọ ọrụ mgbe niile rube isi na "àgwà na-agba mbọ, ezi okwukwe nnabata "bussiness philosphy, iji ihe innovatitive mmụọ iji nweta ihe anya na imekọ ihe ọnụ site na ndị enyi anyị. aha na market.We elekwasị anya na ezi uche price na na-oge nnyefe.
Taa ndị ahịa anyị sitere na mba 30 ndị tụkwasịrị obi na Ngwaahịa SWB, n'Africa, Asia, South America, Europe, North America na Middle East wdg.
Anyị kwenyere na ndị ọrụ abụghị naanị akụ kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ, kamakwa isi nkuku nke ụlọ ọrụ ahụ. Shanghai West Bridge Inc., Ltd. na-etinye oke mkpa n'ịmepụta ọrụ na-atọ ụtọ maka ndị ọrụ na ịnye ha ohere mmepe sara mbara na gburugburu ọrụ siri ike, sayensị, ọmịiko na imeghe.We hụ na ndị ọrụ nwere ozi zuru oke na nnwere onwe zuru oke ịrụ ọrụ ka ikike ha wee mezuo. Nkwurịta okwu na ọzụzụ bụ ihe ndị bụ isi nke ọdịbendị njikwa anyị. N'ime nke a, anyị kwenyere na ndị mmadụ nwere ike ime mkpebi ziri ezi ma rụọ ezigbo ọrụ.Anyị na-agbasi mbọ ike igbo mkpa nke ndị ọrụ anyị site na mkparịta ụka a haziri ahazi na nzaghachi na arụmọrụ onye ọ bụla mgbe ị na-ezute azụmaahịa n'ọdịnihu. Anyị na-enye ndị ọrụ anyị ohere mmepe ma na-atụ anya ka ha were ọrụ maka mmepe onwe ha. Ọzụzụ na mmepe kwesịrị ekwesị dị oke mkpa maka ọganiihu nke ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ya. Anyị na-agbasi mbọ ike iji nye ohere dị iche iche nke ọrụ ọrụ na-agbanwe agbanwe nke kwekọrọ na mkpa onye ọ bụla, anyị kwenyere na ịmepụta nguzozi n'etiti ọrụ na ndụ onwe onye. Ndị ụlọ ọrụ ghọtara na ọnọdụ ọrụ a na-atụ anya ya dịgasị iche na ọkwa ndụ ha na ebumnuche onwe ha.
Anyị na-agba ndị ọrụ anyị ume ka ha na-arụ ọrụ nke ọma, na-echepụta ihe, ma na-arụ ọrụ siri ike n'ụzọ anyị si arụ ọrụ, n'ihi na ịmata ihe na obi ike nwere ike gbaa ndị mmadụ ume ịchọpụta ụzọ ọhụụ nke ọrụ.
Shanghai West Bridge Inc., Ltd. na-achọkarị uto nke nzukọ na ndị ọrụ ya, na-enye ha ezigbo ọrụ ọrụ, ọtụtụ ohere mmepe ọrụ, ọzụzụ bara ụba na ohere mgbanwe mba ụwa.
Site na nyocha nyocha na nguzobe ngosipụta nke arụmọrụ maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ, Shanghai West Bridge Inc. , na-anwa anwa ibu ọrụ, ma nweta mmepe ọrụ site na mmụta na omume na-aga n'ihu.
Shanghai West Bridge Inc. gaa ọrụ.